युगसम्बाद साप्ताहिक - न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ इतिहास
Sunday, 05.31.2020, 12:01am (GMT+5.5) Home Contact
न्यायिक क्षेत्रमा नयाँ इतिहास
Thursday, 07.14.2016, 08:26am (GMT+5.5)
काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक महिला प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको छ । आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वसम्मत रुपमा प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेपछि यो इतिहास बनेको हो ।
यति मात्र हैन मुलुकको राष्ट्रप्रमुख पनि महिला नै हुनुहुन्छ भने सभामुख पनि महिला । यस्तो सन्दर्भ विश्व राजनीतिमै दुर्लभ मानिन्छ । लामो समयको विवादपछि गठन भएको संसदीय सुनुवाई समितिले पूर्णता पाएर काम थालेपछि संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त पदपूर्ति भएको छ ।
डिएनए परीक्षण गर्दा एउटै अनुहार भएका जेठाजु र श्रीमान् गएको र त्यो परीक्षण सही नभएको पुष्टि भएपछि सो फैसला आएको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “जन्मको प्रमाणपत्र छ, आमाले बच्चाको बाबु यही हो अदालतमा उभिएर भनेपछि के प्रमाण खोज्ने ? ।”
समितिले अनुमोदन गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सुनुवाइ समितिमा न्यायलय भ्रष्टाचारमुक्त गरी स्वच्छ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
आफूले पछिल्लो समयमा गरिब र पिछडिएका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यस्ता खालका मुद्दा पाँच हजारमध्ये तीन हजार हेरिसकिएको छ । त्यस्तै, थुनुवासम्बन्धी झन्डै दुई हजार मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । सिफारिस भएका ११ न्यायाधीशको नियुक्ति भएमा झन् छिटो मुद्दाको फैसला गर्न सकिने उहाँको विश्वास छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, “तीन महिनामा नौ जना न्यायाधीशले तीन हजार मुद्दा हर्न सक्छ, ११ न्यायाधीश थपिँदा आठ हजार मुद्दा फैसला गर्न सक्छौँ ।” आफूले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएपछि तीन हजार मुद्दा फैसला गरेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सबैमा न्याय पु¥याउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतभित्र ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ नै स्थापना गरिएको छ । अहिले पाँच प्रतिशत ठूलाबडा मात्र अदालतमा आउने गरेका छन् । त्यसमा १३ प्रतिशत महिला अदालत आउने गरेका छन । “के अदालत धनीका लागि मात्र हो ? गरिबका लागि अदालतमा होइन ?” –प्रश्नको शैलीमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो । उहाँले अन्याय सहेर बस्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । अदालतबाट फैसला उतार ढिला हुन्छ भन्नेछ । तर महत्वपूर्ण फैसलाहरु तुरुन्त लेख्ने पनि गरिएको छ । जनशक्तिको अभावका कारण सोचेअनुरुप छिटो भने हुन सकेको छैन ।
यसैबीच सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानन्यायाशीध सुशीला कार्कीलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा कार्कीले शपथ लिनुभएको हो ।
कार्कीलाई सो पदमा नियुक्ति गर्न गत चैत २८ मा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई संसद्को सुनुवाइ विशेष समितिले आइतबार अनुमोदन गरेको थियो । कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै आफूले शपथ लिएलगत्तै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नवनियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवलाई राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो । डा यादवलाई गत शुक्रबारको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकले नियुक्तिको सिफारिस अनुमोदन गरेको थियो । उहाँहरुले सोमबार नै आ–आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुभयो ।